Pyae Phyo (MMiTD): November 2013
Zuma Deluex Portable PC Game !!! (15Mb)
ဒီနေ့တော့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပျင်းပြေလေးအဖြစ် Portable ဖြစ်တဲ့ Zuma Deluex
ကွန်ပြူတာဂိမ်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ကလည်းတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ထပ် ဒီဇိုင်းအလန်းလေးပါ။အားလုံးသိပြီးသားလဲဖြစ်မှာပါ။ Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုက်တဲ့စက်မှာကစားဖို့
Zuma Blitz in whichastellar combo is only one flick of the mouse and click away, Zuma's Revenge is almost like learning an entirely new game, thanks toasimple joystick. Sure, suchadrastic change comes with the territory. But that doesn't change that it's much more difficult to be precise and quick when draggingajoystick toward the target. (The fact that this version has no "game over" certainly helps with this.)
ယနေ့မှစပြီးကျွန်တော်ဆိုဒ်ကိုလာလည်တဲ့ User တွေအတွက်ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲရာတွင်အခက်အခဲမရှိအောင်
မည်သည့် Skip မှကြားခံထားခြင်းမရှိပါ။ ဆော့စ်ဝဲများကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကြော်ငြာများကို တစ်ကြိမ်လောက်သာ ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။
Post by သန်းတိုးအောင် မှတ်စု.
ref:Djjoe Man (MMF)
အမျိုးအစား: Android Application , မြန်မာ font
Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ 29, 11, 2013 နေ့ထွက် Internet Download Manager V 6.18 Build 8 Final Full
ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာသုံးသူတိုင်း အများဆုံး သုံးကြတဲ့ Internet Download Manager က ဒီနောက် ပိုင်း ထွက်တဲ့ Version မှာ Fake Serial ပြဿနာ တတ်ပါတယ်။ အဲအတွက် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း နည်းရှာရင်း လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာများလို့ စိတ်ညစ်ခဲ့ ရဖူးပါတယ်။
မနေ့က 29 ရက်နေ့က ထွက်ထားတဲ့ Internet Download Manager V 6.18 Build 8 ကိုတော့ Fake Serial မဖြစ်အောင် သေခြာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးမှ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ လုံးဝ Fake Serial မတတ်တော့ပါဘူး။
Install လုပ်ပြီး Full ဖြစ်အောင် Activated လုပ်နည်းကတော့ အရင်ကနည်းထက် နဲနဲ ကွဲလွဲ သွားပါ တယ်။ ဒီမှာ ရေးရင် စာအရမ်းများသွားမယ်။ အဲတာကြောင့် Download ဖိုင်ထဲမှာပဲ Text ဖိုင်မှာ နည်း တခါတည်းရေး ထားပေးပါတယ်။ လုံးဝ ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကြိုက်ရင် ဆွဲထားကြနော်။
Download Internet Download Manager V 6.18 Build 8 Final Full
Posted by ဇော် မင်း သန်း
အမျိုးအစား: Computer Software , Downloader , Internet Download Manager
How To Unlock And Root Huawei Ascend Y300 (all versions)!!!
ကျွန်တော် ဒီပိုစ့်မှာ Huawei Y300 ကို Root လုပ်နည်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါ။တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပိုစ့်တင်မှု့နောက်ကျရင်နားလည်ပေးပါ။
အောက်မှာ Huawei Y300 အတွက် step by step ရှင်းပြထားပါတယ်သေချာကြည့်ပေးပါ။
ဒါကတော့ Huawei Y300 ရဲ့ hardware versions တွေပါ....
Huawei Y300 (T8833) - TD-SCDMA / China Mobile
Huawei Y300-0000 (U8833) - WCDMA China Unicom
Huawei Y300-0100 (U8833) - WCDMA International
Huawei Y300-0151 (U8833) - WCDMA Extra Frequency
Huawei Y300-0000 / Y300-0100 / Y300-0151
Y300 Root Tools & Huawei USB driver - Download 1.4
Unlock the bootloader အတွက် သူ့ရဲ့မူရင်း Huawei Y300 ဆိုဒ်မှာ သွားလုပ်လို့ရပါတယ်။
Y300-0000: Visit this website Chinese language အတွက် Google translator ကိုအသုံးပြုပြီး
မိမိ model ရွေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ Huawei website ပါ။
အဲ့ဒီ့မှာသွားလုပ်ရင်တော့ unlock code ကို e-mail မှတဆင့်ပြန်ပို့ပါတယ်။ Wait 2-3 days ပါ။
ကျွနိတော်အောက်မှာစလိုက်ကြရအောင်... သူငယ်ချင်းဖုန်းက Huawei Y300 သေချာပြီဆိုရင်..
1) ဖုန်းကို Settings -> Developer Options and make sure USB debugging လုပ်ထားပါ။
2) ပြီးရင် အပေါ်မှာ Downloaded package Y300-AiO-ROOT-v1.3.zip ကို Desktop ပေါ်မှာထားပါ
3) Huawei_Y300_drivers.exe ကို Install လုပ်ပါ ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ
4) Turn off your phone, remove the battery, wait5seconds.
5) ပြီးရင် battery ပြန်ထည့်ပါ။
6) Volume DOWN button pressed for at least 10 seconds. Your phone should freeze on the splash screen (fastboot mode).
7) အိုကေ ဒါဆိုရင်သူငယ်ချင်းရဲ့ဖုန်းကို computer နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ Computer မှာ new device
8) ပြီးရင်ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင်ထဲကနေ “UnlockTools” ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် check_bootloader.bat ဆိုတာကို double click လုပ်ပါ။ ခဏစောင့်ပါ သူအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
9) From the same folder double click unlock_bootloader.bat and when prompted enter the 16-digits unlock code you received from Huawei.
10) The phone will execute some checks, restore factory settings and finally reboot (this may take while)
display “Bootloader Lock State: Unlocked”
TWRP v2.5 custom recovery for Y300 information on the developers page.
Turn off your phone, remove the battery, wait5seconds ပြီးရင် battery ကိုပြန်ထည့်ပါ။
Volume DOWN button pressed for at least 10 seconds. Your phone should freeze on the splash screen (fastboot mode).
From the folder “UnlockTools” run flash_recovery.bat and follow the steps.
When the recovery has been flashed successfully, your phone will reboot (this may takeawhile).
Flash SuperSU tool
Finally we will install the latest SuperSU tool.
1) “SuperSU-ROOT.zip” ကို Copy လုပ်ပြီး SD card ထဲထည့်ပါ။
2) Turn of your phone.
3) Hold the Volume UP and Power button TWRP recovery menu is displayed.
4) TWRP menu ကနေ SD card ထဲမှာရှိတဲ့ ”SuperSU-ROOT.zip” ကို “Install” လုပ်ပါမယ်။
5) Install ပြီးသွားရင် “Reboot system” ကိုရွေးပါ။ reboot your phone.
All Done! If there isaSuperSU icon on your phone, it means the root process was successfull.
မှက်ချက်။ ။ Root / Rom/Recovery/Frimware/reset to factory စသည်တို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်
ပြုလုပ်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှု 50% ပါဝင်ပါသောကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တစ်စုံတရာအမှား
အမျိုးအစား: Huawei Ascend Y300 Root လုပ်နည်း
GTA San Andreas: Extreme Edition 2011 [FINAL] PC Game
GTA San Andreas: Extreme Edition 2011 [FINAL] PC Game လေးပြနရှယ်ထားပေး
ပါတယ်။ဂိမ်းကောင်းကောင်း ကစားလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ ဆောင်သာထားဗျာ။
ကျနော်ကတော့ အရမ်းပဲ ဒီဂိမ်းကိုကြိုက်တယ် ကစားလို့အရမ်းကောင်းလို့ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။
AV Voice Changer Software Diamond V 7.0 ( For PC )
PCတွေ့မှာအသုံးပြုဖို့ AV Voice Changer Software Diamond V 7.0 ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသံဖိုင်တွေကို အသံအမျိုးမျိုးပြန်လည်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာ အဓိကထားပြီးသုံး
ပါတယ်။ ဥပမာ။ ကလေးတွေအသံဆိုရင် လူကြီးအသံပြန်ပြောင်း အဲလို့ နေရာတွေမှာ
အမျိုးအစား: Audio Editors
Internet Download Manager 6.18 Build 8 Final + Full Patch + Keygen
Internet Download Manager ကတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မိတ်ဆက်ပေးနေစရာမလိုပါဘူး။ အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်းအသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Patch ဖိုင်က အရင် Patch တွေထက်ပိုမိုက်ပါတယ်။ Patch & Keygen ကိုတွဲထားတာလေးပါ။ Patch ကို Copy ကူးပြီး Cထဲ က Program File ထဲက Internet Download Manager ထဲကို Copy ကူးပြီး Patch နှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ Keygen က လည်း Generate Key ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ Key ကို Copy ကူးပြီး IDM ထဲက Registration ထဲမှာသွားဖြည့် လိုက်ရုံပါဘဲဗျာ။
How To Jailbreak 7.0.4 iOS Tethered With RageBreak For Windows
1. Download the RageBreak.exe (executable file), place it on your desktop and run the program as an Administrator.
2. Click the first option inside the RageBreak GUI, or graphical user interface, followed by “OK” to the popup to have the tool automatically download and build the necessary opensn0w files.
Tap “Wi-Fi,” followed by the “i” next to the network your iPhone4is connected to.
Take note of the IP Address listed here, as you’ll need it in the next step.
iTune Net Framework
Update Zip (see instructions listed below) (RageBreak Data)
As always, thank you for reading my new Jailbreak guide and stay tuned for future coverage on iOS 7.0.4 and for updates on the evad3rs’ upcoming iOS7Jailbreak for all devices. Be sure to like us on Facebook, follow us on Twitter, add us on Google+ and stay tuned for coverage on new Jailbreaks.
Post BY http://www.jailbreaktechinfo.com
IOS7အထက် jailbreak လုပ်ချင်သူများအတွက်သတင်းကောင်လေးပါ။
jailbreak မလုပ်ခင် လိုတဲ့ဖိုင်တွေကတော့ အပေါမှာပြထားပါတယ်။
အကုန်လုံးဒေါင်းဖို့လိုပါမယ်။ RegeBreak Windows ကိုဒေါင်းပါ။ ပြီး Java ရှိရင် update လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။
update ဖြစ်ရင် အဲဒီအဆင့်ကိုကျော် လိုက်ပါ။ ပြီးရင် IOS7.0.4 ကိုတင်ထားလိုက်ပါ။ မတင်ရသေးရင်းသွားဒေါင်းပြီးတင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် iTune နဲ့ Net Framework ကို update ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်ရင်အပေါမှာသွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် update zip ကို ဒေါင်းထားပါ ပြီးရင် ဖိုင်ဖြည်ပြီးရင် C ထဲမှာထားပေးရပါမယ်။ လုပ်နည်းအစအဆုံးကို youtube ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: jailbreak 7.0.4
MM Ringtone Collection (Andriod ဖုန်းအတွက် မြန်မာ Ringtone တွေ စုစည်းထားတဲ့ Application ပါ)
Andriod ဖုန်းသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မြန်မာ Ringtone တွေ စုစုပေါင်း ၄၅ ပုဒ် စုစည်းထားတဲ့ App လေးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ ကို nyimin latt က ဖန်တီးထား တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာသီချင်း ၄၅ ပုဒ်မှ ယခု သီချင်းနဲ့ ရှေးတုန်းကသီချင်း, နောက်ပြီး ကိုကို ဖုန်းလာနေတယ် ဘာညာဘာညာ အစရှိတဲ့ Ringtone တွေ စုံလင်စွာပါ ပါတယ်။ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေ တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ အဆင်သင့်လေး ထည့်လိုက်ရုံလေးပဲ။ ကြိုက် ရင် အောက် မှာ ဆွဲထားကြနော်။
Download MM Ringtone Collection
အမျိုးအစား: Android Application , Ring Tones
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ OfficeSuite Pro v7.3.1543 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ရုံးသုံး / လုပ်ငန်းသုံး File Type များစွာကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Microsoft Word , Excel , Power Point , PDF အစရှိတဲ့ ဖိုင်အမျိုး အစားများကို ကွန်ပြူတာမှာ မြင်နိုင်ဖတ်နိုင်သလိုဘဲ Android Phone မှာလည်း OfficeSuite နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ Office 2010 အထိ Support လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးတည့်စေမယ့် Application တစ်ခုဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူထားစေ ချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.1 နှင့်အထက်ဖုန်များမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
မြန်မာဖောင့် မျိုးစုံ နှင့် အခြားသောအလှဆင်နိုင်သည့် Font ပေါင်းများစွာ
ပြည်ပကနေ ဘော်ဒါတစ်ယောက်လှမ်းတောင်းထားလို့ အခြားသောလိုအပ်သူများလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ Font တွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Font တွေ ကိုဒေါင်းယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတာ ကျွန်တော်သိ လို့ပါဘဲဗျာ။ အခြားလူတော်တော်များများမှာမရှိတဲ့ Font တော်တော်များများ ဒီထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အဓိက စုစည်းထားတာကတော့ ၀င်းမြန်မာစာစနစ်အပြင်အခြားသော မြန်မာဖောင့်တွေတော်တော်များများကိုပါဝင် ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ ဖောင့်တွေကို ကွန်ပြူတာ Software တွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာယူနိုင်ပေ မယ့် ဖောင့်တွေကို ၀ယ်မရတဲ့နေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ။
အမျိုးအစား: Fonts , မြန်မာ font
အမျိုးအစား: window8 , နည်းလမ်းများ
Screen Keyboard on Desktop !!! Portable ကီးဘုတ်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်...(10Mb)
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မိမိကွန်ပြူတာမှာ Keyboard အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင် ဒီကောင်
လေးကိုဆောင်ထားပါ။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်ကြိုက်သလိုရိုက်လို့ရပါတယ်။ On-Screen လေးဖြစ်တဲ့အတွက်
Taskbar မှာရှိနေမှာပါ။လိုတဲ့အချိန်ခေါ်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ စာရိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ Auto ကီးဘုတ်
လေးပေါ်နေတာပါ။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာလည်း အရင်သုံးနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
Shift+Ctrl နှိပ်ပြောင်းရုံပါပဲ။ Screen Capture လေးပါ ပါတဲ့အတွက်ပိုအဆင်ပြေါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ကာလာ
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။မြန်မလိုပြောင်းလိုက်ရင်တော့ ကီးဘုတ်မှာမှာ မြန်မာလိုတော့ မမြင်ရပါဘူး။
အတုံးတွေဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကစာလုံးတွေရဲ့ အထားအသိုကိုမှတ်မိရင်ရပါပြီ။ စာရိုက်လိုက်
ရင်မြန်မာလိုထွက်လာပါတယ်။ အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပြီးတော့တစ်ခုပိုကောင်းတာက Gtalk မှာလည်း
စာရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ Icon လေးကအဆင်သင့်နေပါတယ်။ Icon Keyboard လေးက Taskbar မှာ
Keyboard ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆွဲသာထားလိုက်။ ပြီးတော့ ကလိကြပေါ့ခင်ဗျာ...
အမျိုးအစား: PC Softwares , Software
1CLICK DVD Copy Pro 4.3.1.6 Multilanguage
1CLICK DVD Copy Pro 4.3.1.6 Multilanguage | 7.0 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ 1CLICK DVD Copy Pro 4.3.1.6 Multilanguage လေးပါ။ DVD အလွယ်ကူခြင်းနဲ့ ဘမ်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့7MB ရှိပါတယ်။ patch ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
အမျိုးအစား: Burning Softwares
SwiftKey Tablet Keyboard v4.3.2.235
Android | .apk | 14.99mb
Spacebar sound is now different to other keyscluding space bar behaviour and punctuation settings
ဒါလေးကတော့ SwiftKey Tablet Keyboard v4.3.2.235 လေးပါ။ update လေးထွတ်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 14.99 MB ရှိပါတယ်။
Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6,5,4,3 Full With serial
Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6,5,4,3 | 94.3 MB
When you start to install Knoll Light plugin, start with Knoll Light Factory 3.2 --bit.exe then Effects Suite 10.0.2 --bit.exe .This order will give you the maximum presets available = 129.You can install only one if you want but you may not get maximum presets available.
When you start to install Knoll Light Factory 3.2 --bit.exe click the "here" while install to confirm an offline registration.
===== If you have Adobe CS6 ============
1. Install first Knoll Light Factory 3.2 --bit.exe check adobe CS5 option from installer even if you don't have CS5 on your computer.The installer will tell you the size and createanew folder in D or E or C , called "PSCS5PLUGINPATH32BIT" (in 32bit system) with another folder inside named "Knoll Software" with the plugin (you can delete that newly .txt file created in that folder).Take this folder "Knoll Software" and move it in x:...Adobe Photoshop CS6Plug-ins folder.Delete "PSCS5PLUGINPATH32BIT" the remaining folder.
2. Install the Effect Suite with copy and paste same serial for Knoll Light.This time check the CS6 option.This additional installer will overwrite the "LightFactory.8bf" in CS6 and will add additional preset content to the folder C:Documents and SettingsAll UsersShared DocumentsKnoll SoftwareKnoll Light FactoryCustom Lenses . At the end you must have 129 presets ready to use in Adobe.
Copy and paste the serial provided for Knoll Light Factory 3.2 on the Effects Suite installer for additional content. (from 53 or 76 to 129 presets)
Works on 32- and 64-bit Vista and Windows7systems, Windows XP
read the instruction text before installing.
Tested on Win XP SP3 32bit.
Seed at least 1:1 ratio.
If you like the software, buy it.
ဒါလေးကတော့ Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop CS6,5,4,3 လေးပါ။ ကီးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူကတော့ plugin လေးပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 94.3 MB ရှိပါတယ်။
Winrar ကို Version အသစ်ထွက်တိုင်း Full License ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ !!!
Winrar နဲ့အသုံးပြုရပါတယ်။များသောအားဖြင့် ဖိုင်တွေက Winrar နဲ့လာတာများပါတယ်။ဒေါင်းလော့စ်
ဖိုင်တွေကို Install လုပ်နိုင်ဖို့သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့စက်ထဲမှာ Winrar ဆော့စ်ဝဲကိုအရင်သွင်းထားရပါမယ်။
အခုကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ပိုစ့်က ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲထားတဲ့ Winrar ကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာ
သုံးနေတဲ့ကာလပတ်လုံး | Version တွေအသစ်ထွက်နေသမျှကာလပတ်လုံး အမြဲတမ်း License နဲ့
Full လေးဖြစ်နေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ဆော့စ်ဝဲနဲ့အတူရှင်းပြပေးချင်တာပါ။
ကွန်ပြူတာအလုံးပေါင်းများစွာသုံးသူတွေအတွက် 100 PC usage License dll လေးကိုထည့်ပေးပါ။
ကွန်ပြူတာ Local Site သမားတွေအတွက် Local Site License dll လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ကွန်ပြုတာ Single PC usage သမားတွေအတွက် Single PC usage License dll လေးကိုထည့်ပေးပါ။
အခုသူငယ်ချင်းတို့အောက်မှာအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ (32/64bit)
အလိုက် Winrar ကို Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Patch ဖိုင်ထဲမှာ Dll လေးရှိပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုထည့်ရ
မလဲဆိုတာ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ License patch မထည့်ခင်ကပုံပါ..
evaluation copy ဆိုတာပေါ်နေပါတယ်။နောက်ဆိုမကြာခင်ဒေါင်းတော့ပါမယ်။
အောက်မှာတော့ License patch ထည့်ပြီးသားပုံပါ။
မရှိတော့ပါဘူး။ အိုကေသွားပါပြီ...... လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
အမျိုးအစား: Software , WinRAR
▼ November ( 243 )
Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ 29, 11, 2013 နေ့ထွက် In...
How To Unlock And Root Huawei Ascend Y300 (all ver...
GTA San Andreas: Extreme Edition 2011 [FINAL] PC G...
AV Voice Changer Software Diamond V 7.0 ( For PC )...
Internet Download Manager 6.18 Build 8 Final + Ful...
မြန်မာဖောင့် မျိုးစုံ နှင့် အခြားသောအလှဆင်နိုင်သည်...
Screen Keyboard on Desktop !!! Portable ကီးဘုတ်အ...
Red Giant Knoll Light Factory 3.2.1 for Photoshop ...
Winrar ကို Version အသစ်ထွက်တိုင်း Full License ဖြစ...
November 27, 2013 မှာ Update ထွက်လာတဲ့ Facebook v3...
Earth HD Deluxe Edition Wallpaper လေး
Netguide Journal Vol (3), Issue (12) (27.11.13)
Shell Terminal Emulator .Apk
Computer ပေါ်မှာ Andriod App Icon ပေါ်စေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်...
Andriod ဖုန်းထဲမှာ MRTV4အစီအစဉ် ကို တိုက်ရိုက်ကြ...
Vroot နဲ့ Root ဖောက်နည်း
Pixelan DissolveMaster 1.1 Plugin for Adobe After ...
Alien Skin Blow Up 3.0.0.691 Revision 24190 Plugin...
Autodesk Universal Keygen X-Force 2014 with Video ...
Hardware Device အားလုံးကို Block လုပ်ပေးမယ့် - USB...
အခြေခံ Hacking နည်းပညာစာအုပ် (မြန်မာဘာသာပြန်)
How to Install VirtualBox !!! VirtualBox သုံးပြီး ...
Internet Download Manager 6.18 Build7Full With P...
Advanced Uninstaller Pro 11.25 Full Version
Speak Your Wishes Android apk
4.2 ကနေ4.2.2 ထိ Gmail PlayStore Gtalk သွင်းနိုင်တဲ...
How to recover photos deleted from your digital ca...
Football Manager Handheld 2014 APK DATA 5.0.3 Prem...
Warring:Unresponsive script error in Firefox !! ပြ...
Aurora Blu-ray Media Player 2.13.2.1421 Full Versi...
Fake Call & SMS & Call Logs Pro 3.9 Full APK
Window 8 တင်နည်းစာအုပ် (Ebook)
IObit Advance System Care 7.0.6 Full Version
Wondershare SafeEraser 1.1.0.6 Portable (14Mb)
DFX Audio Enhancer 11.109 + Crack (LATEST)
CCleaner Professional / Business 4.08.4428 Full Wi...
PowerArchiver 2013 v14.01 ML + Serial Key Free Dow...
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (46) (25.11.13)
Samsung Galaxy Ace2I8160 ကို Master Reset to Fac...
Playstore မှ ဒေါ်လာနဲ့ ၀ယ်ရတဲ့ Andriod Game တွေကို ...
Microsoft ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်- Windows 8.1 PRO Previ...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 29 (25.11...
Kaspersky Keys All version (24/11/2013) | Not Bloc...
Android APPs - Pack 016
AVG Internet Security 2014 Beta2Serial Keys Till...
IDM Serial + Keypatch + Full Protable !!!! (12Mb)
EximiousSoft GIF Creator v7.21 + Crack Free Downlo...
GO_Launcher_EX_4.08 ( for Android )
Ulead PhotoImpact X3 (Full Version With Key) ပုံတေ...
Nero 2014 Platinum 15.0.03500 Final [Crack+Key]
AVG Internet Security 2014 14.0 Build 4161 Final [...
IObit Malware Fighter PRO v2.2.0.20 + Key
လန်းလဲလန်း ဂိမ်းကစားဖို့လဲ ကောင်းတဲ့ Windows7NVI...
Take Screenshot in Android Phone without Any Softw...
Genuine အဖြစ် Activated လုပ်ပြီးသား Windows7Rega...
Kakasoft Folder Protector v6.21 Free Download
Internet Download Manager ကို Activated လုပ်နည်း V...
Winamp Pro 5.66 Build 3507 Multilanguage Full With...
Advanced SystemCare Pro v7.0.6.364 + Crack
Madcrosoft PC TuneUp Tools 2014 v8.1.003 + Key
Samsung Galaxy Note2ကို Android 4.4 KitKat Launc...
Internet Download Manager6.18build7 Full ဘားရှင်ြး...
Netguide Journal Vol (3), Issue (11) (20.11.13)
Next Nexus Live Wallpaper PRO v1.4.1 APK
WatchESPN ( for Android )
ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေး Windows XP အသစ်- WI...
Drift Mania Street Outlaws v1.04 apk + Data Full F...